Zvemagariro Media Ita nezvisingaitwe | Martech Zone
Mugovera, March 14, 2015 Mugovera, March 14, 2015 Douglas Karr
Humwe husiku ini ndaitaura kune mumwe mushambadzi uye isu tanga tichikurukura pasocial media, zviitiko, uye mhedzisiro. Akanga achindiudza kuti sei iye asina kunge aona mhedzisiro kubva pasocial media kuti ive yakakosha. Kutaura chokwadi, handigoni kutaura kuti handibvumirani zvachose. Nepo chimiro changu chehunyanzvi uye bhizinesi richisvika richiramba richikura, vanhu vanogona kucherechedza kuti zvangu zvinotevera pasocial media zvave zvamira kwenguva yakati rebei.
Mukuvimbika kwese, yakawanda yenguva yangu yandinopedzera pasocial media iri muhurukuro dzakavanzika kunze kwenhare yangu yehunyanzvi. Ini ndinotora chikamu mazuva ese munhaurirano dzehunyanzvi, asi icho chidimbu chekushandisa kwangu pachezvangu.
Izvi zvinoreva here kuti haina kukosha? Aiwa, zvirokwazvo kwete. Ini handishingaire kuita mari yangu yemagariro vateereri saka hachisi chinhu chandiri kurasikirwa nemari pairi. Uye, zvakatendeseka, ini handidi kugara ndichitengesa pasocial media. Ndiri kusiya mari here patafura? Pamwe - asi iyo hombe nhamba yehuwandu hwemagariro enhau anotevera achienzanisa nevakananga vateereri vangaite bhizinesi neni zvakanyanyisa kupfuura.
Izvo zvinotevera zvinopa ndiko kusvika kwandinofanira kutora mukana wekunyora nekutaura mikana. Vanhu vanoona nhamba hombe, saka vanondivhurira musuwo. Kana ndiine iwo mikana, ivo vanounza yakananga mari. Saka - mukufamba kwenguva ndinowana pundutso kubva pasocial media mashandisiro? Ndinofunga kudaro!
Ndicharega kushingairira kushambadzira uye kushandisa pasocial media? Chaizvoizvo kwete - ichiri chiteshi uko vateereri vangu varipo, nharaunda inowedzera kukosha kubasa rangu, uye uko vanhu vanotsvaga sarudzo dzekutenga. Hazvina kudaro sekukurumidza or kunobatsira semimwe migero kwandiri. Ini ndinoona kuti ini ndawedzera pasocial media kukanganisa kana ini ndasanganisa iyo muchinjika-chiteshi kushambadzira uye kukwidziridzwa kupfuura kuishandisa silo'd chiteshi, saka ndiwo maitiro atinoita nekuita yedu yemagariro nhepfenyuro.
Masocial network nzvimbo dzakanaka dzekukurudzira basa rako uye bhizinesi - kunyanya ivo vatengi vachitsvaga makwara vachishandisa mitsara yakakosha, mazwi uye ma hashtag - asi havazi ivo nzvimbo yekutengesa kwakaoma saka zvakakosha kuve nekudyidzana kwechokwadi. Iwe unofanirwa kukudziridza kuvimba uye nzwisiso neavo vangangove vatengi.
Ivo vanhu veInishuwarenzi Octopus vaita basa rakakura pano rekuisa pamwechete mamwe makuru enhau enhau maitiro akanakisa mune ino infographic pakuronga, mashandisiro, ma hashtag, vateereri nekushandisa zvemukati. Iri izano rakanaka!
Tags: pasocial media rairopasocial media zvakanaka maitiropasocial media ita nezvisingaitwe
Doug, anodzidzisa kwazvo chinyorwa chinoshanda.